748 panel / vc 3 afọ 5 ọnwa gara aga #104
Enyochala m gburugburu ma achọpụtala m otu ụlọ ọrụ freeware ma ọ bụ igbe nkịta dị elu nke m nwere ike itinye na 748F na m na-efe ofufe (m ga-egwu maka njikọ ahụ mgbe e mesịrị lol).
onye m na - eji 747 panel nke hey ihe ọ bụla, ọ na - arụ ọrụ ... mana m ga - achọ ịchọta ezigbo VC. ANYỊ na-efegharị na panel 2d kama eh VC dị mma ugbu a, mgbe ahụ, mgbe ị nwetara ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ n'ihu gị
748 panel / vc 3 afọ 4 ọnwa gara aga #112
Gh0st, lelee anya Ken Wigginton. Enwere m otu okwu ahụ, chọrọ ka igbe nchịkọta 2D / VC kacha mma, ọ mekwara ọtụtụ ndị dị mma, ihe niile maka Boeing na Airbus.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203
748 panel / vc 3 afọ 4 ọnwa gara aga #116
Aga m eleba anya na .... .....